Uummatn Oromoo tokkumman Filannoo wayyanne bara 2015 dura dhabaachuu qaba.
Barii 2015 bara Bilisumma fi walabuma isiinf akka ta’uu hawwina.
Oromoon Bara haraa 2015 isiin ga’ee jeechaa, Filaannoo Wayyanen garbumma Oromoo mirkanesuuf goodhamuu irratti ammo akka hin hirmanee isiinf dhamna. Fillaannoo wayyane irratti hirmachun, deggerun, filaannotti dhiyachuun, filaachuun ykn haalaa mijeesun siirna garboonfata wayyaneef hayyama keenudha. Wayyanen siirna garboonfatati malee siirana demokrata’awa akka hin tane waggoota 23n darban keessatti qabataman ifaa goodhe jira. Ulagaa kamiin iyuu uumani Oromoo wayyane waan filatuuf hin qabu. Wayyanen saba Oromoo lafa irra duggugee balesuuf yakka dugguga sanyii baleesuu oromoo irratti rawwata jira, fakeenyaf:-
Waluma galatti bara darbee kana yaakii Oromoo irratti hin rawwatamin hin jiru. Dhiigii Oromoo baayinan kan dhangala’ee bara ABOn biyya ba’ee, bara fillannoo 2005 fi Jeequmsa Master planini walqabatee bara 2014 goodhamee kana irratti qoosatti waan dagatamuu miti. Motummaan Mafia Wayyane dhiiga Oromoo akkasiti dhangalasuu kana demokratawa goodhani waliin dorgomuuf filanootti dhiyachuun walaluma gudadha. Baratoota ijoole da’iman rasaasan kan tumee ajeesuu siirni wayyane Uummataa bakka bu’aa jeedhan filaachuuf yaadun rasaasa inni ittin Uummataa ajeesaan keenuuf dha.
Wayyanen lafa Oromoo humnan fudhatee ijoole Oromoo dhiiga dhangalasuu Paarlamaa isaa keessatti seera kabajee bakka bu’oota Uumtaa seeran marisisa jeechun nama Ethiopia hin beekne kan samii irra dhufee yoo ta’ee malee paarlamaa wayyane baayeen keenya seene ilaale yaalee dadhabnee keessa adeemne. Wayyane/TPLF akkuma humnan qabate humnan bu’aa malee fillaannnon angoo gadii dhissa jeetan hin yaadina. Wayyanen barsiisoota oromoo fi baratoota oromoo kan university keessa ari’atuu oromoon filannoo moo’ate Paarlamaa Ethiopia akka galan goodha jeechun waan fakatuu miti, kana goochun isaan mee mal fiduu? waan feene goochuu ni dandeenya jeechu isaatti. Ogantoon Wayyane akkuma argaa jiru, Mallaqaa garggarsa Ethiopiaf keenamuu samachuu, lafa Oromoo gugguratan, dargaggoota fi shamaran biyya Arabatti gugguratan mallaqaa isaa bank biyya ala dhokfatan biyaa ba’uuf malee biyyatti keessatti demokrasii , nagenya fi tasgabii fidhuuf yaada hin qaban.
Kanafuu Filaanno soba wayyanen odeesitu Uumani Oromoo kami iyuu filachuu, filatamuu fi deggersa goochun irratti hirmachuun yakka wayyanee irratti qooda fudhachuu waan ta’eef. Tokkumman Fillannoo soba kana balaalefachuu qaba.
Injjifannoo Uummata Oromoof !!!